hyaluronic acid, Bovine nsụkọta, Polyglutamic Acid - Baoding
ịchọ mma Efrata
ụlọ ọrụ OKWU
Baoding Kwesịrị Ntụkwasị Obi Industry Co., Ltd. hiwere na 2005, emi odude ke Baoding National High-tech Industrial Park, Hebei Province, nke specializes na R & D, mmepụta na ahịa nke ngwaọrụ maka ahụ ike na ngwaahịa, onye isi na ngwaahịa ndị sodium hyaluronate, collagen, pancreatin, pepsin, osisi extracts etc na exported na ihe karịrị 20 mba ndị dị ka America, Europe, Asia.
Baoding Kwesịrị Ntụkwasị Obi Industry Co., Ltd. azụlitewo ọtụtụ ndị mmadụ ná mmalite nke ya oruru na iguzobe nke a zuru okè ọrụ usoro: àgwà akara, ahịa, ahịa, akwụkwọ, mgbe-ahịa.
Natamycin a na-eji gbochie ka ero na oriri. Ọ bụ ọrụ megide yeasts na Ebu, ma ọ bụghị bacteria. Nke a na-eme ka ọ ga-adaba adaba maka ojiji na oriri na chara n'onwe mgbe nhazi. Ọ nwere uru n'elu omenala chemical preservatives. Ọ na-adịghị emetụta flavor. Ọ nwere obere mmetụta / ndabere na acidity nri.
Gịnị bụ pancreatin
Ngwa nke enzyme preparations enzyme preparations nwere ugbu a otu n'ime ndị kasị dị irè ekwukwa n'akwụkwọ Mmeju dị. Enzymes bụ ụmụ irighiri ihe na ike-adị n'elu chemical mmeghachi omume - ha pụrụ inyere n'ịwa ọhụrụ ụmụ irighiri, agbaji ụmụ irighiri ihe na njikọ ụmụ irighiri ọnụ, na kewaa ...
Bụ Hyaluronic acid oriri
Quality bụ ndụ nke enterprise.
Okwu: 7a 401-01 Hebei University Science Park, # 5699 North Second Ring Road, Baoding, Hebei 071051 China.
© Copyright - 2010-2022: All Rights echekwabara. Apụta Products - Sitemap.xml - IGBOB Mobile
sodium Hyaluronate , sodium Hyaluronate ntụ ntụ , Bovine nsụkọta , Pure 99% Hyaluronic Acid ntụ ntụ , Pure Hyaluronic Acid , Hyaluronic Acid ntụ ntụ ,